ANTOKO MMM Mety ho mpifanadrina amin’ny Filoha…
Tsy mitsahatra mametraka ny olony amin’ny faritra maro ny antoko MMM ankehitriny.
Midika izany fa efa miomana amin’ny fifidianana afaka dimy taona ihany koa ny filohany izay mety ho mpifanandrina amin-dRajoelina tena matanjaka ary tsy hampoizina. Vakiana fotsiny ny fihetsika hataon’ny filohany ankehitriny izay marihina fa anisan’ny olona tena atokisan’ny filoha. Nandeha iny ny fifidianana Ben’ny tanàna, nanosika mafy ny kandidàny izy, izay nifaninana tamin’ny kandidà natolotry ny IRK. Maro tamin’ireo kaominina eto Madagasikara no resin’ny antoko MMM ny kandidà IRK. Manginy fotsiny ny fanendrena ny olon’ny antoko any anivon’ny minisitera isan-tsokajiny any. Fantatra koa izao fa miady fo aman’aina ny antoko mampiditra ny olony hanana toerana ho governora. Tena ilaina io toerana io ho an’ireo antoko nahazo Ben’ny tanàna maro mba hanohana azy ireny. Araka ny loharanom-baovao azo dia solombavambahoaka iray lany tamin’ny anaran’ny antoko MMM koa no manao ny ainy tsy ho zavatra hanosika Jeneraly iray eo amin’ny toeran’ny governoran’ny Faritra Analanjirofo. Fantatra anefa fa ity Jeneraly ity dia olon’ny HVM ary efa nampitondra faisana ny mpanara-dia ny antoko MAPAR fony izy nitana andraikitra tao amin’ny Faritra Atsinanana. Toa midika izany fa ny olona akaiky an-dRajoelina ihany no hanipy hoditr’akondro hampianjera azy.